Anna, Author at Cele Zone
အလှပေါ်အယဉ်ဆင့်နေတဲ့မြန်မာဆန်ဆန်ပုံရိပ်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေသဘောကျနေတဲ့ ထရက်ရှာလေး
By AnnaPosted on September 4, 2020
ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့အဆိုတော်၊သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိလာတဲ့ အနုပညာရှင်မျိုးဆက်တစ်ယောက်ပါ။ကိုယ်ပိုင်မိသားစုလေးကိုတည်ထောင်ထားပြီဖြစ်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့သမီးလေးတစ်ဦးကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထရက်ရှာလို့ပရိသတ်တွေသိကြတဲ့သမီးလေးကတော့ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့ချစ်တဲ့သူတွေလည်း များနေကြတာပါ။ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ သူတို့မိသားစုပုံရိပ်လေးတွေကိုမကြာခဏဆိုသလို မျှဝေပေးလေ့ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလည်း သမီးလေးရဲ့မြန်မာဆန်ဆန်ပုံရိပ်လေးတွေကို “အလှပေါ် အယဉ်ဆင့် ကျွန်မမြန်မာရှင့်” ဆိုပြီးတော့ ပြန်လည်မျှဝေထားတာပါ။ ထရက်ရှာလေးကိုတော့ […]
Covid -19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းကိုမျှဝေလာတဲ့ လွင်မိုး
By AnnaPosted on September 3, 2020
မင်သားကြီးလွင်မိုးကတော့ တစ်ချိန်ကပရိသတ်တွေအသဲကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေသိပ်မလုပ်တော့ဘဲ စီးပွားရေးတွေကိုသာလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အားပေးနေကြဆဲပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေတဲ့ Covid -19 ရောဂါကြီးကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကြီးအတွက် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကုသဆေးတွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပြီး အချို့နိုင်ငံတွေကတော့ အောင်မြင်လာပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ […]
ရခိုင်ကပြန်လာပြီး ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာသျှတ္တရရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်လည်မျှဝေလာတဲ့ မယ်လိုဒီ
မယ်လိုဒီကတော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေသိကြမှာဖြစ်သလို ဒီဇိုင်နာသျှတ္တရကတော့ နာမည်ကြီးတဲ့ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း သိနေကြမှာပါ။ လတ်တလောကူးစက်မှုပျံ့နှံ့နေတဲ့ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြန်လာတဲ့ ဒီဇိုင်နာသျှတ္တရရဲ့အကြောင်းကို မယ်လိုဒီကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေချ့်မှာပြန်လည်မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ မယ်လိုဒီကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေချ့်မှာ “မနေ့ က ….ရခိုင် ပြန် သံသယ ရှိ သူ….Designer Shar […]
ဝါခေါင်လပြည့်နေ့မှ ာဆွမ်းကပ်ကာကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
By AnnaPosted on September 2, 2020
မင်းသမီးချောလေးဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ ပရိသတ်တွေရှေ့စတင်ရောက်ရှိလာကတည်းက ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးချောလေးဟာ အခုအချိန်ထိလည်း အသက်နဲ့မလိုက်အောင်နုပျိုနေသလို အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုများစွာကိုလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကရွှေကစ်လို့ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေးဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ အလှူဒါနပြုဖို့လည်း လက်မနှေးသူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလည်းဝါခေါင်လပြည့်နေ့အလှူအကြောင်းကို “ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ မေတ္တာ အခါတော်နေ့ နေ့ဆွမ်း အလှူ” ဆိုပြီးတော့ […]
အသက်(၂၉)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အလှူဒါနများစွာပြုလုပ်ရင်းဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ နီနီခင်ဇော်
ပရိသတ်အချစ်တော်နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်ကတော့ သံစဉ်များနဲ့ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲကစပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိလာကာ အခုဆိုရင် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအဆိုတော်အဖြစ်ရပ်တည်နေပါပြီ။ နီနီကတော့ အောင်မြင်မှုများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားရင်း အခုဆိုအသက်(၂၉)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ (၂၉)နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့နီနီတစ်ယောက် အလှူအတန်းများစွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ပရိသတ်တွေပါဝင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့အလှူတွေအကြောင်းကိုတော့ “29th Birthday Donation ! နီနီနဲ့ နီနီ့သူငယ်ချင်းမောင်နှမတွေ Ninians တွေ […]
မွေးနေ့လမှာရှိခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေအကြောင်းကိုပြောခဲ့တဲ့ နန်းစုရတီစိုး
By AnnaPosted on September 1, 2020
မင်းသမီးချောလေးနန်းစုရတီစိုးကတော့ အလှတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်နုနယ်ပျိုမျစ်လွန်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် တင်စားခံရလေ့ရှိသူပါ။ သူကတော့ ပရိသတ်တွေကို သီချင်းအသစ်လေးတွေဖန်တီးပေးလေ့ရှိသလို အနုပညာအလုပ်တွေလည်း ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီနေ့ကတော့ စက်တင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး ဒီလထဲမှာ နန်းစုရဲ့မွေးနေ့ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ နန်းစုကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေချ့်မှာ “Hello ~ September မွေးလ လေးလည်း […]
ကပ်ရောဂါကြီးကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေများနေရပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်အောင်နေဖို့ပြောလာတဲ့ အေးမြတ်သူ
By AnnaPosted on September 1, 2020 September 1, 2020
ပါးချိုင့်လေးတွေနဲ့အပြုံးလှလှလေးတွေကိုပိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးအေးမြတ်သူကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကိုလည်း ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ပွင့်လင်းပြီးဟန်ဆောင်မှုမရှိသလို အနုပညာအရည်အချင်းအပြည့်ရှိတဲ့အေးမြတ်သူကတော့ အကယ်ဒမီဆုကြီးကိုလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ အခုလည်း ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်း စိတ်ညစ်နေရာတာပါ။ တစ်ရက်တည်းနဲ့ပိုးတွေ့ရှိသူအရေအတွက်များလွန်းတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့အခြေအနေမှာ “မနက်အိပ်ယာနိုးတာနဲ့ ပထမဆုံး တွေ့ရတာ စံချိန်သစ်တင်တယ်…. တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတာတော့အမှန်ပါ… […]
အမှတ်တရတွေနဲ့အတူ မန္တလေးမြို့ကြီးကိုလွမ်းနေတဲ့ မင်းသားချောခါရာ
By AnnaPosted on April 30, 2020
နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် Mister တစ်ယောက်အဖြစ်က အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့သူကတော့ ခါရာပါ။ ခန့်ညားချောမောတဲ့မင်းသားတွေထဲမှာ ခါရာတစ်ယောက်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့အသည်းကျော်မင်းသားတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့အမိုက်စားဘော်ဒီတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသလို သဘာဝကျအောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတစ်ဦးလို့လည်း မှတ်ချက်ပေးခံရသူပါ။ ခါရာကိုတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာတွေ့ဖူးသလို မနေ့ကဖြစ်သည် (၂) နဲ့ လိပ်ပြာ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့လူသိများတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ […]